हामी सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड र हुवावे मेट एक्स | ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | मोबाईलहरू, प्रस्तुतिकरण
केही हप्ता पहिले हामीलाई थाहा थिएन कि यो फोल्डिंग स्मार्टफोनको वर्ष हो। अफवाहहरु, अनुमानहरु र अधिक अफवाहहरु, तर कुनै आधिकारिक डाटा छैन जसले हामीलाई सुनिश्चित गर्दछ कि तहको पर्दा अब आउँछ। र यस्तै, यदि केहि छैन, केही दिनमै हामीसँग पहिले नै मार्केटमा दुई आधिकारिक मोडेलहरू छन्। सामसुले अन्ततः लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको ग्यालक्सी एक्स प्रस्तुत गर्‍यो।
लाग्छ कि यो खुला मौसम हो र यो सम्भावना भन्दा बढी हो कि सामसु and र हुवावे धेरै फर्महरू द्वारा अनुसरण गरिनेछ। फोल्डयोग्य स्मार्टफोनहरू 'नवजात' स्मार्टफोन अवधारणा हो। र त्यस्तै, सामान्य नियमको रूपमा उनीहरूसँग सुधारको लागि धेरै ठाउँहरू छन्, र विवरणहरू सफा गर्न सकिन्छ। A नयाँ अवतरित टेक्नोलोजी जुन हामी अगाडि हेर्छौं र यो पक्कै पनि आलोचना र प्रशंसा दुबै को वस्तु हुनेछ। आज हामी यी नयाँ मोडेलहरू तुलना गर्नेछौं उनीहरू कसरी एकै छन् र कसरी फरक छ भनेर तपाइँलाई बताउन।
1 फोल्डिंग स्क्रीनहरू हाम्रो बीचमा छ
2 सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड बनाम हुवावे मेट एक्स
3 तुलना तालिका ग्यालेक्सी फोल्ड र हुवावे मेट एक्स
फोल्डिंग स्क्रीनहरू हाम्रो बीचमा छ
हामी तपाईलाई पहिलो लचिलो डिस्प्ले फोनको बारेमा लामो समयको लागि बताउन चाहन्छौं। र यस पटक हामी यो पहिलो बाट मात्रै गर्नेछौं, हामी स्मार्टफोनको यो रोचक नयाँ अवधारणाको लागि दुई नयाँ बेट्स तुलना गर्नेछौं जोखिमपूर्ण को सैमसंग ग्यालक्सी तह, जसले अनप्याक्ड घटनामा भाग लिने सबैका बीच आश्चर्यचकित गर्न सफल भयो। र नयाँ आगमनकर्ता हुआवेई मेट एक्स, जसले कसैलाई उदासीन छोडेको छैन।
चीजहरू हाम्रो स्मार्टफोन इकोसिस्टममा धेरै चाखलाग्दो भइरहेका छन्। लाग्छ कि हामी यी दिनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिरहेका छौं। अहिलेसम्म पूरै नयाँ स्मार्टफोन ढाँचा बारे जान्दै, र यो हामी प्रेम गर्छौं। यो धेरै सम्भाव्य छ भविष्यमा फेब्रुअरी २०१ 2019 को यस महिनालाई बजार परिवर्तन भएको क्षणको रूपमा बोल्नेछ। यद्यपि यो सम्भव पनि छ कि यो अवधारणा सफल हुन समाप्त हुँदैन जुन हामीले यसलाई जान्दछौं।
एउटा ठूलो अवरोध फर्महरू भेट्न जाँदैछन् कुनसँग कम्तिमा अहिलेको लागि, उच्च उत्पादन लागत। यसको अर्थ एक महत्त्वपूर्ण ठोकर एक उच्च बिक्री मूल्य। र हामीलाई थाहा छ कि मूल्य एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अझै बढि जब हामी प्रविधिको बारेमा कुरा गर्छौं जुन अझै अगाडि अझै धेरै विकास कार्यहरू छन्। समय र विशेष गरी रिजर्भले छोटो अवधिमा बजारले यस नयाँ प्रकारको मोबाइल फोनमा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउछ हामीलाई बताउँछ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड बनाम हुवावे मेट एक्स
हामीले त्यो चिन्नु पर्छ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्डले हामीलाई मुख खोल्यो केहि दिन अघि प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा। एक फोन अवधारणा जुन हामी अन्तमा जान्न चाहन्थ्यौं यसको परिचालन र इन्टरफेस कसरी हुन्छ भनेर एक विचार प्राप्त गर्नका लागि। फोन सामसु ofका फ्यान र आलोचकहरूले मन पराए। बजारमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुनु अघि सबै सजग हुन्छन्। यसको दिनमा आईफोनको पहिलो संस्करणसँग तुलना गर्नुहोस्। फोल्डिंग फोनहरूको पहिलो अन्त्यमा आइपुग्यो, र यो सामसु fromबाट भयो।
तर हिजो हुआवेले यो फेरि गरे। अन्य फोल्डिंग फोन जुन हामीले एकल चुहावट थाहा पाउँदैनौं। केवल अघिल्लो रात, र MWC मा राखिएको पोस्टरबाट, हामी एक विचार प्राप्त गर्न सक्छौं कि Huawei पनि "लचिलो" ट्रेनमा चढिरहेको थियो। यस बर्षको MWC थोरै decaffeinated जस्तो देखिन्छ सामसु ofको महत्वपूर्ण प्रस्तुतीकरण शुरू हुनुभन्दा अघिदेखि नै। तर Huawei अपेक्षा उत्पादन को जिम्मेदार छ हामीले सोच्यौँ कि हामी मिस गर्नेछौं।
बजार अनुहार आमने सामने सबैभन्दा साहसी उपकरण राख्न को समय आयो। र यद्यपि यो निश्चित भन्दा बढि निश्चित छ कि हामीसँग यस तुलनामा चाँडै नयाँ प्रतिस्पर्धीहरू हुनेछन्, हामीले सामसु and र हुवावेको साहसलाई यो साहसका साथ अघि बढ्ने पहिलो व्यक्ति भएकोमा चिन्नु पर्छ। यदि यस प्रकारको उपकरण समेकित छ हामी सँधै यो कुरा मनमा राख्नेछौं कि स्यामसंग एक नै थियो जसले बाटोमा डोर्यायो। र त्यो Huawei शुरू देखि धेरै नजिकबाट पछ्यायो।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड र हुवावे मेट एक्स उस्तै हो, फोल्ड गर्न सकिने स्मार्टफोन। तर यदि हामी यसको निर्माणमा हेर्छौं भने हामी पाउँछौं धेरै शारीरिक भिन्नता अपरेटिंग पनि। लगभग, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्डको स्क्रीन छ, जुन हामी कल गर्न सक्छौं "बाह्य", र एक संग "आन्तरिक" स्क्रिन, जुन फोल्ड हुन्छ। स्क्रिनबाट संक्रमण जुन हामीले फोनसँग देख्छौं यो भित्रीमा फोल्ड गरिएको छ जब यो खोल्दछ वास्तवमै राम्रोसँग प्राप्त भयो। Huawei Mate X, अर्को तर्फ, छ एकल स्क्रिन जुन हामीले फ्रन्टमा फेला पार्छौं र यो सिधा सिधा गुड्दछ आधा।
तुलना तालिका ग्यालेक्सी फोल्ड र हुवावे मेट एक्स
यहाँ दुबै उपकरणहरु बीच तुलनात्मक तालिका छ। यो दिमागमा राख्नुहोस् त्यहाँ चश्माहरू छन् जुन हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। Huawei उपकरणको सन्दर्भमा, त्यहाँ हार्डवेयरको बारेमा जानकारी छ जुन सार्वजनिक छैन। र सुरु हुने मूल्य "सूचक" पनि छ किनकि यो पूर्ण रूपमा आधिकारिक छैन। तैपनि, यसले हामीलाई उनीहरू कसरी एकै किसिमका छन् र विशेष गरी कसरी यी दुई नयाँ स्मार्टफोनहरू फरक छन् भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
मोडेल ग्यालेक्सी तह मेट X
पटिएको स्क्रीन 4.6 इन्च HD Plus सुपर Amoled .6.38..6.6 वा .XNUMX..XNUMX इन्च (पक्षमा निर्भर गर्दै)
स्क्रिन खोल्नुहोस् 7.3 इन्च 8 इन्च
फोटो क्यामेरा ट्रिपल चौडा कोण क्यामेरा - अल्ट्रा वाइड र टेलिफोटो फराकिलो कोण - अल्ट्रा वाइड कोण र टेलिफोटो
प्रोसेसर Snapdragon 855 Kirin 980
र्याम मेमोरी 12 जीबी 8 जीबी
भण्डारण 512 जीबी 512 जीबी
ब्याट्री 4380 mAh 4500 mAh
वजन 200 g 295 g
अनुमानित मूल्यहरु 1900 € 2299 €
हामीले भनेजस्तै, दुबै उपकरणहरूले धेरै सुविधाहरू र लाभहरू साझा गर्छन्। तर तिनीहरू अरूमा पनि फरक छन् धेरै एउटा विवरण जुनमा हामी धेरै फरक पाउँछौं क्यामेरामा हो। सामसु ग्यालक्सी फोल्डमा ट्रिपल रियर क्यामेरा छ जब यो बन्द हुन्छ, र डबल फ्रन्ट क्यामेराको साथ स्क्रिनको खुला भागमा।
Mate X, अर्कोतर्फ, केवल तीन क्यामेरा छन् que फोन जोडेर तिनीहरू पछाडि हुनेछन्, तर के जब तपाईं यसलाई खोल्नुहुन्छ, तिनीहरू जो सामने छन्। मेट क्यामेराका लागि कम क्यामेरा तर कम सम्भावनाहरू छैनन्। हामी तस्वीर लिन सक्छौं सेल्फी एकै क्यामेराको साथ जुन हामी "सामान्य" फोटोहरू लिन्छौं। के तपाई दुबै मध्ये एक लाई मन पराउनुहुन्छ? तिमीलाई दुबै मन पर्छ? वा यसको विपरित, यो ढाँचाले तपाईंलाई विश्वास गर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » हामी सामसु Galaxy ग्यालेक्सी फोल्ड र हुवावे मेट एक्स तुलना गर्दछौं
यो MWC मा प्रस्तुत गरिएको नयाँ सोनी Xperia १ हो